Kooxda chelsea oo wadahadalo la qaadatay wakiilka xiddiga Robert Lewandowski. - Iftiin FM
Kooxda chelsea oo wadahadalo la qaadatay wakiilka xiddiga Robert Lewandowski.
by Iftiin FM Reporter July 22, 2021
Kooxda chelsea ayaa la soo sheegaya in ay wadahadalo la qaadatay wakiilka Robert Lewandowski si ay ugu dhaqaaqdo xagaaga xilli Thomas Tuchel uu kor u qaaday raadinta weeraryahan cusub xagaagan.
Chelsea ayaa si aad ah u rajeyneysa inay cusboonaysiiso weerarka kooxda iyaga oo isku diyaarinaya in ay ku tartamaan ku guulaysiga horyaalka premier League yadoo Timo Werner uu xilli ciyaareed niyad jab leh ku qaatay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay premier League.
Gianluigi Donnarumma oo ku guuleystay Goolhayaha ugu fiican adduunka ee Yashin Trophy
Arsenal oo guul muhiim ah ka gaartay Benfica.
Tababare Tuchel ayaa si cad u sheegay in uuna Tammy Abraham mustaqbal ku lahayn Stamford Bridge iyada oo uu xiddiga 23 jirka ah xiiso ka helayo Arsenal halka uu Olivier Giroud haatanba ka tagay kooxda.
Kooxda Man United oo codsi uu dirsatay maamulka Priemier Leaque.
Kooxda Chelsea ayaa aad loola xidhiidhinayay saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland laakiin Borussia Dortmund ayaa dalbanaysa lacag waali ah oo kor u dhaafaysa 150 milyan oo euro.
Kenya oo laga helay kiisas badan oo cudurka Corona.
Natiijada Imtixaankii shahaadiga ee Fasalka 12-aad Dugsiga Sare Soomaliya oo la shaaciyey.
Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
Xiddiga Tyrell Malacia Oo Shaaca Ka Qaaday Cida Ku Qancisay Ku Biirista Man United.
Gabriel Jesus oo nambarka sagaalaad uu xiran doono Arsenal